Bhim Prasad Gautam – Business Aristocrat
He is President of Karobar Daily Newspaper, and Chairman of Society Of Ecnonomic Journalist of Nepal. Working for more than one decade on the field of News and Media. We gotachance to take his personal interview. Please do havealook at his journey till now.
१ तपाई कुन क्षेत्रका लागि भावुक हुनुहुन्छ ?
झण्डै २ दशक पत्रकारिता क्षेत्रमै विताएको तथा एकेडेमिक रुपमा समेत पत्रकारितामै एमफिलसम्मको अध्ययन गरेको नाताले मेरो पत्रकारिता क्षेत्रसँग गहिरो नाता र सम्बन्ध छ । केन्द्रमा रहेर नीतिगतदेखि जिल्लामा रहेर कार्यान्वयनगत तहसम्मको अनुभव मसँग छ । पत्रकारितामार्फत विकास निर्माणमा मुद्दामा धेरै कलम चलाएको छु । विगतमा पत्रकारिता पेशामा बाँच्न कठिन भएपनि अहिले यही पेशामा लागेर आफू र परिवारलाई सजिलै पाल्दै आएको छु । यसकारण पत्रकारितासँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ । म पत्रकारिता पेशाप्रति गौरव गर्छु । व्यक्तिगत र व्यवसायिक दुवै रुपमा मेरो पत्रकारिता क्षेत्रसँग गहिरो भावनात्मक सम्बनध छ । पत्रकारिताविनाको मेरो जीवन फिक्का बन्छ । मेरो व्यक्तिगत जीवनसँग सबैभन्दा जोडिएर पत्रकारितानै आउँछ । पत्रकारितामा आवद्ध भएकोमा कुनै ग्लानी पश्चाताप छैन, बरु गौरव र खुशीयाली छ । पत्रकारिताविनाको जीवन म कल्पना पनि गर्न सक्दिन ।
२ यदि कुनै आमदानीको श्रोत नदिए पनि तपाई कुन क्ष््रोत्रमा आवद्घ हुनुहुन्थ्यो ?
पत्रकारिता क्षेत्र नेपालमा यसरी संस्थागत रुपमा विकास हुँदै गएको छकि यसमा पेड नगर्ने कुरै हुँदैन । यदि पे भएन भने त जीवन धान्न कठिन हुन्छ । जीवन धान्न कठिन भएपछि व्यवसायिक पत्रकारिताको कुरा धेरै टाढाको कुरा बन्छ ।
३ तपाई के काममा सोचे भन्दा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ ?
पत्रकारितामा मेरो व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो अचम्मको कुरा केही छैन तर पत्रकारिता अहिले अचम्मकै पेशा हो । हरेक दिन नयाँ नयाँ सूचना खोज्ने पेशा आफैमा अचम्मको हुन्छ । हरेक दिन यस्ता सूचना खोज्नका लागि कुद्दा खेरीका क्षणहरु त अचम्मकै हुन्छन् । पत्रकारितामा जे कुरा कसैले सार्वजनिक गर्न खोज्छ, त्यो विज्ञापन हो र जुन कुरा लुकाउन खोज्छ, त्यो समाचार हो भनिन्छ । असामान्य र अचम्मका कुरा मात्र समाचार हुन्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । यसकारण हरेक क्षण यस्ता सूचना खोज्नमै पत्रकारितामा सकृय हरेक व्यक्ति कृयाशिल हुन्छन् ।
४ तपाईको जीवनका अविस्मरणिय कुनै पलहरु सम्झिन चाहनुहुन्छ ?
पत्रकारिता जीवनका हरेक क्षणहरुमा स्मरणीययोग्य क्षणहरु छन् । सबै त यहाँ उल्लेख गर्न पनि सकिदैन । माओवादी द्धन्द्धको बेला माओवादीको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सेनाको हेलिकप्टर घुम्दा ज्याननै जाने भयो भनेर डराएकोदेखि माओवादीले हाम्रो पक्षमा नलेखेको भनेर सफाई गर्ने घोषणा गर्दाको त्रासका घटनाहरु प्नि छन् । समाचार लेखेकै कारण २४ बर्षदेखि बन्द काभ्रेको भीमखोरीस्थित जुगेपानी चीज कारखाना सञ्चालन भएदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर काण्डको समाचार लेखेको कारण तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक जेल जानुपरेको घटना पनि ताजै छन् । समाचार लेखेकै कारण धेरै विकास र प्रगति भएका उदाहरण छन् । काभ्रेको डाँडापारी र कोशीपारीका खानेपानी, सडकदेखि गरिबीसम्मका कथा लेखेर आफ्नो जीवनको पत्रकारिताको यात्रामा धेरै स्मरणीय क्षणहरु पनि बनेका छन् ।
५ कति लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ?
प्त्रकारितामै प्रवेश गरेको त २०५५ सालदेखि हो । २०५५ सालमा काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने गतिविधि साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेको हो । जीवीकोपार्जनका लागि गाह्रो भएपछि म २०५८ सालमा रेडियो नेपालको काभ्रे संवाददाता भएर आफ्नो जिल्ला फर्किए । रेडियो नेपालमा समाचार कसरी आउँछ भनेर जिज्ञासु मेरो लागि रेडियोमै बोल्ने अवसर मिल्यो । त्यसपछि मेरो पढाईमा केही ब्रेक लाग्यो तर पत्रकारिताको यात्रा जारी रह्यो । काभ्रेमा बसेर पत्रकारिताको पढाईलाई सुस्तसुस्त बन्यो तर पढ्न छोडिन । स्नात्तकसम्मको पढाई काभ्रेमै बसेर सकाएँ । स्नाकोत्तरको पढाई भने केही ढिला भयो । काभ्रेमा बसेर राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल वान टेलिभिजन, इमेज च्यानल र राजधानी दैनिकको काभ्रे संवाददाताको रुपमा काम गरे । साथै स्थानीय काभ्रेको पहिलो दैनिक पूर्वीय दर्पण दैनिकका साथै काभ्रेपोष्ट साप्ताहिक, इन्द्रावती साप्ताहिक, सुनकोशी साप्ताहिक, सञ्जीवनीपत्र दैनिक÷साप्ताहिक लगायतमा काम गरे । फेरि १० बर्ष काभ्रेको पत्रकारिताबाट काठमाण्डौ फर्किए । सौर्य दैनिक, राजधानी दैनिक हुँदै अहिले कारोबार दैनिकमा आवद्ध छु । अहिले २० बर्ष भयो । निरन्तर रुपमा पत्रकारिता गरिरहेको छु । काभ्रेमा छँदा सबै क्षेत्रको समाचार संकलन गर्नुपर्दथ्यो । अहिले काठमाण्डौ आएपछि विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार संकलनमा बढी केन्द्रित हुन्छु ।
६ तपाईका शिक्षा र तपाईको कामको मेल?
शिक्षाको कुरा गर्दा मैले पत्रकारितामै प्रमाणपत्र, स्नात्तक र स्नाकोत्तर गरिसके । एकेडेमीक रुपमा पनि मैले पत्रकारितामा स्नाकोत्तर सकेर पत्रकारितामै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागको एमफिलको पहिलो ब्याजको विद्यार्थी भएर अहिले थेसिसको अन्तिम अवस्थामा छु । पत्रकारिता पढेकै कारण पत्रकारितामा लागेको हो । पत्रकारिता शिक्षा र पत्रकारिताको गहिरो सम्बन्ध छ । पूर्ण रुपमा व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नका लागि पत्रकारितानै पढेको नै हुनुपर्छ । पत्रकारिता पढेको व्यक्तिले कहिले पनि पत्रकारिताको व्यवसायिकतालाई भुल्न सक्दैन, पत्रकारितालाई आफ्नो र कसैको स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्न सक्दैन । ऊ जहिले पनि पूर्ण व्यवसायिक रुपमा लाग्छ । पत्रकारिताको सिद्धान्त, धर्म, दायित्व र जिम्मेवारीलाई पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा व्यवासायिक पत्रकारितालाई पूर्ण रुपमा अघि बढाउनका लागि पत्रकारिता शिक्षाले ठूलो योगदान दिएको छ । विगतमा पत्रकारिता पढेर पत्रकारिता गर्नेहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम थियो । अहिले धेरै पढेको छ । संख्या मात्र पढेको छैन, नेपालको पत्रकारिताको समग्र व्यवसायिक पक्ष पनि बलियो र संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको कारणनै पत्रकारिता पढेर पत्रकारितामा आउनेहरुको संख्या बढेर हो ।
७ तपाईले यो क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर बाल्यकालदेखि नै तयारी गर्नु भएको थियो ?
बाल्यकालमा त मलाई पत्रकारिता भन्नेनै थाहा थिएन । मेरो पत्रकारितामा प्रवेशको कथानै रमाइलो छ । जब म २०५४ सालमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) पास गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाण्डौ आएँ । काभ्रेको विकट ढुंखर्क–३, गोर्खाली गाउँको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएकोले दिउँसो जागिर खाएर प्रमाणपत्र तह राती पढ्ने योजना थियो । सोही अनुसार राती समूहको फर्म भर्नका लागि आरआर कजेज पुगे । फर्म भर्नका लागि समस्या भएकोले सँगै फर्म भरिरहेका एक जना साथीसँग सहयोग मागे । त्यो साथीको फर्ममा एउटा विषय पत्रकारिता लेखिएको रहेछ । मलाई पत्रकारिता कस्तो विषय भनेर जिज्ञासा लाग्यो । उनले यो पत्रपत्रिकामा लेख्नका लागि पढ्ने भनेर बुझाएँ । मैले न बुझेर फेरि सोधे । उनले रेडियोमा बोल्नका लागि पढ्ने भनेर भनेपछि मलाई बढीनै चासो लाग्यो । रेडियोमा समाचार कसरी आउँछ भनेर आत्मा विकास माविमा पढ्दाको समय सधै प्रश्न गर्ने मेरो लागि त्यो उत्तरले मनभित्र छोयो । त्यसपछि मैले पत्रकारिता एउटा विषय पढ्ने निर्णय गरे । त्यसपछि मेरो पत्रकारिताको क्यारियर सुरु भयो ।
८ तपाईको १० वर्षे योजना के छन्?
आगामी १० बर्षभित्र पत्रकारिता क्षेत्रको सफल व्यक्ति बन्ने लक्ष्य छ । पत्रकारिताको पेशा र एकेडेमिक दुवै रुपमा आफूलाई सक्षम र सबल बनाउन परिश्रम गरिरहेको छु । साथै अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि आफूलाई स्थापित बनाउने दौरानमा छु ।
९ जीवनमा सबै भन्दा ठूलो समस्या के देख्नु भएको थियो ?
पत्रकारिता गर्न सहज त छैन । विभिन्न वाधा अवरोधहरु त आईहाल्छन् । त्यस्तो ठूलो अवरोध त झेलेको छैन । समाचार लेखेवापत त्यसको प्रतिकृयास्वरुप केही धम्कीको भाषामा फोन आउनु, प्रतिकृया दिनु त पत्रकारिता जीवनका लागि सामान्यनै हो । सबैभन्दा ठूलो त पत्रकारिताका सबै अंग, प्रत्यंग पूरा गरेर लेख्नुपर्छ । समाचार पत्रकारिताको सिद्धान्त र धर्म अनुसारकै छ भने यसमा धम्की, अवरोध आउँदा पनि डराईहाल्नु हुँदैन । मेरो बानी के छ भने कुनै समाचार कुनै संस्था वा व्यक्तिको विरुद्धमा लेखिएको छ भने लेखिएकै दिन गएर कुरा गर्छु । एकछिन उनीहरुबाट आक्रोश आउँछ अनि भोलिपल्टदेखि सामान्यीकरण हुँदै जान्छ । एकपटक समाचार लेखेर त्यसपछि भाग्न थालियो भने त्यसले समस्यामाथि समस्या सिर्जना हुन्छ । पत्रकारितानै पेशा गर्ने भएकोले समाचार लेखेपछि सम्बन्धित निकायमा नजाने र व्यक्तिलाई भेट्दिन भन्नु गलत हुन्छ । समाचार संकलनका लागि त्यो निकाय र व्यक्तिसम्म पुग्नैपर्छ । यसकारण ठूलो समस्या नआओस् भन्नका लागि समाचार लेखेकै दिन गएर भेट्दा तत्कालीन आक्रोश समाधान भएर अघि बढ्न सक्छ ।
१० तपाईको जीवनको सबै भन्दा ठूलो असफलता के हो?
सुरुका दिनमा पत्रकारिता सिक्दै गर्दा धेरैनै कठिनाई थियो । आज जस्तो कम्युटरमा समाचार लेख्ने अवस्था थिएन । कागजमा समाचार लेखेर लगेपछि पटक पटक समाचार नमिलेको भन्दै च्यातिएर फेरि लेख्नुपरेका उदाहरण त धेरै छन् तर जब पत्रकारिता जमेर गर्न थालियो, त्यति ठूलो असफलता भोग्नुपरेन । बरु दैनिक रुपमा समाचार लेख्नुपर्ने कारणले अलि खोजमूलक र अनुसन्धानमूलक समाचार लेख्न सकिएको छैन । यो वाध्यता पनि हो तर पत्रकारिता जीवनका लागि यो सबैभन्दा ठूलो असफलता पनि हो । लेख्दै नलेखेको होइन तर जति धेरै खोजमूलक समाचार लेख्नुपर्ने हो, त्यो संख्या एकदम कम छ । जहाँसम्म पैसाको कुरा छ, पत्रकारिता पेशामा लागेपछि आर्थिक समस्या त स्वभाविक हो । पत्रकारिताबाट पैसा भन्दा इज्जत बढी पाइन्छ । धेरै पैसा कमाउँछु भनेर पत्रकारितामा लाग्ने नै होइन ।
११ तपाईको सफलताको प्रेरणा को हुन?
पत्रकारितामा पाएको सफलताको पछाडी सबैभन्दा ठूलो हात त परिवारकै छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो साथ पत्रकारिता पेशा र शिक्षाका गुरुहरुको छ । पेशामा युवराज घिमिरेदेखि कुवेर चालिसेसम्म अनि पत्रकारिता शिक्षाका पी खरेल, चिरञ्जीवी खनालदेखि डा. सुधांशु दाहालसम्मको योगदान मेरो सफलताको पछाडी छन् । यसक्रममा धेरै गुरु र सम्पादकहरुको साथ, सहयोग, सुझाव र सल्लाह छ । समाचार लेखेपछि यसबारे सुझाव, प्रतिकृया, आलोचना गर्नेहरुको सहयोग त झन सफलताको लागि ठूलै छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को कोषाध्यक्ष, महासचिव हुँदै अहिले अध्यक्ष हुने बेलासम्ममा संस्थापक अध्यक्ष प्रतिक प्रधानदेखि निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यसम्मका आउँदासम्मका सबै अध्यक्षहरुको योगदान पनि विर्सन नसक्ने छ ।
१२ सफल हुन के शुत्र चाहिन्छ ?
हरेक क्षेत्रमा सफलता पाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो त पेशाप्रतिको प्रतिवद्धता र व्यवसायिकतानै हो । अध्ययन, परिश्रम, मेहनत र खोजमा निरन्तर लागिरहे सफलता हात पार्न सकिन्छ । मेरो जीवनले सिकेको त्यही होन, मेहनत, परिश्रम गर्नका लागि कहिल्यै थाक्नु हुँदैन । सिक्ने कुरामा कहिल्यै भाग्नु हुँदैन । आफू लागेको पेशाप्रति उच्च गौरव राखेर पूर्ण प्रतिवतद्धताका साथ लाग्नुपर्छ ।
१३ तपाईको सबै भन्दा ठूलो सपना के हो ?
पत्रकारिता पेशामा सफल पत्रकार, सफल प्रशिक्षक र अनुसन्धानकर्ता बन्ने सपना छ । त्यो सपना पूरा गर्नका लागि निरन्तर रुपमा लागिरहेको छु ।
१४ तपाईका आज सम्मको अविश्मरणिय दिन कुन हो?
पत्रकारिता क्षेत्रमा सफलताको लागि संघर्ष गरिरहेको छु । अहिले ठूलो सफलता हासिल गरेको छु जस्तो लाग्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तरता दिन सक्नुनै अहिलेको सफलता हो । पत्रकारिता गर्ने र पढाउने काम गरिरहेको छु । अनुसन्धानमा पनि संलग्न हुन थालेको छु । भविष्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।
१५ पत्रकारिता पेशा अंगाल्न चाहने युवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
पत्रकारिता पेशा सबैभन्दा उत्कृष्ट पेशा हो । म पत्रकारिता पेशामा रहेकोले यो भनेको होइन । संसारमा आजको युगमा सबैले खोज्ने सबैभन्दा ठूला कुरा भनेको सूचना हो । पत्रकारिता त्यस्तो पेशा हो, जस्ले सबैभन्दा पहिला सूचना प्राप्त गर्छ । फष्ट ह्याण्ड सूचना पाउने र त्यो सूचना असंख्य जनसमुदायलाई दिने पेशाभन्दा ठूलो पेशा अरु के हुन सक्छ । पत्रकारिता पेशा त्यस्तो पेशा हो, जहाँ इज्जत र पैसा दुवै पाउन सकिन्छ । व्यापार जस्तो पैसा त कमाउन सकिदैन तर पत्रकारितामा लागेर आजको दिनमा इज्जतका साथ बाँच्न सकिन्छ । इज्जत त धेरै हुन्छनै । हरेक समाचार पढ्दा कस्ले लेखेको रहेछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । अरु पेशा गर्नेले हरेक क्षेत्रको सूचना पाउन सक्दैनन तर पत्रकारिता पेशामा लाग्नेले सहज रुपमा पाउँछन् । कामनै सूचना संकलन गर्ने हो । यसकारण मलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट पेशा यही लाग्छ । अझ कति पैसा, जग्गा र घोडा छन् भन्ने आधारमा धनी कहलिने युग सकिएको छ । जोसँग सबैभन्दा धेरै सूचना छ, त्यो सूचना भएको व्यक्ति दक्ष र क्षमतावान हुन्छ । त्यही व्यक्ति संसारको धनी हुन्छ । सूचनाको धनी व्यक्तिनै आजको युगमा धनी हुने हुनाले धनी व्यक्तिभित्र पत्रकार पनि पर्छन । यसकारण युवावर्गले ढुक्कका साथ यस्तो उत्कृष्ट पेशामा आउँदा हुन्छ तर यस पेशामा आउनका लागि अध्ययन, खोज, परिश्रम र मेहनतको आवश्यकता पर्दछ ।